Ngaphandle kokungabaza, i-WordPress iyisistimu yokuphathwa kokuqukethwe okuthandwa kakhulu kuma-aficionats canye ne-webmasters abaqeqeshiwe ngokufanayo. Inika amandla i-25.4% ja va guanyar una bona sessió de blocs de memòria als blocs anama-76.5 wezigidi kusukela ku-2004.
Ngenxa yokuthandwa okungakahleleki, izinkampani eziningi ze-web hosting zinikeza Ukuchofoza kwe-1-app yokufaka i-WordPress ngokuqondile kusuka kuphaneli yokulawula – okuvumela abasebenzisi ukuba baqale ukwakha isayithi ngapaminhakat.
El nqubo isebenza ngokufaka i-WordPress amb el servidor kwi yakho yewebhu. Futhi njengoba ibanjwe ku-intanethi, ungafinyelela kudeshibhodi yakho kusuka noma ikuphi uma nje unesidingo se-intanethi.
Ngokuqinisekile, ikhono lokufinyelela isayithi lakho le-WordPress kunoma iyiphi idivayisi kulula, kodwa ukufaka i-CMS yangakini kwikhompyutha yakho kunezinzuzo ezithile:
Ukuvivinya okusheshayo okusheshayo- Ukuhlola isayithi lakho ngaphandle kokuxhumeka kwe-intanethi kuzokusiza ukuthi ulilingise ngokunembile
Isipele Somuntu siqu- Ukuklama nokuthuthukisa indawo yakho yangakini futhi kusho ukuthi usuhlale unesipele ngokuzenzakalela.
I-Design Process Better – Ukusebenzisa i-WordPress ungaxhunyiwe ku-intanethi ikuvumela ukuba wenze izinguquko zokuklama ngaphandle kokuthinta isipiliyoni sezivakashi ezibukhoma.
Utilitzeu un lloc que utilitza el lloc WordPress-WordPress?
I-WHSR manje ibambisene neCodeable.io ukusiza abasebenzisi abadinga amasevisi okuthuthukiswa kwe-WP / ngokwezifiso.
Ukuze uthole isaphulelo samahhala, sicela ugcwalise leli fomu lesicelo.
Ukufaka i-WordPress kukhompyutha yakho ye-Windows noma per Mac, landela imiyalo engezansi:
1 PC d’Ukufaka iZwiPress kwi-Windows
1.1 Ukufaka i-WordPress
1.2 Ukufaka i-WordPress kwi-Mac Mac
PC d’Ukufaka iZwiPress kwi-Windows
PC d’Ukufaka i-WordPress kwi-Windows, de manera que utilitzeu el nou WAMP, elingalandwa kusuka kubo lloc web esemthethweni.
Qaphela ukuthi i-WAMP iyatholakala ezinhlokweni ezimbili – i-64-bits ne-32-bit. Ukuze wazi ukuthi iyiphi ihambisanayo ne-PC yakho, iya ku-Qala> Izinhlelo> Uhlelo> Mayelana (kubasebenzisi a Windows 10) és nominat a Qala> Hamba, thayipha ku- "sysdm.cpl" bese uchofoza ithebhu "Okujwayelekile".
Isaziso sizovela uma uchofoza inkinobho yokulanda ukuze uthole inguqulo efanele. Qhubeka futhi uchofoze "ukulanda ngqo" ukuze uqhubeke.
Uma ukulanda sekuphelile, qhubeka nokufakwa ngokulandela imiyalo esesikrinini. Funda konke ngokucophelela njengoba i-WAMP inezidingo eziqondile ezizofakwa kahle. Ngezansi kukhona amathiphu ambalwa:
Vula isifaki ngamalungelo omqondisi (Chofoza ngakwesokudla> "Executeu njengoba umlawuli").
Qinisekisa ukuthi unamaphakheji aphinde avuselelwe aVC9, VC10, VC11, VC13 ne-VC14. Izixhumanisi zokulanda zalezi zifakiwe kufaki.
Tanca Skype ngaphambi kokufaka nokusebenzisa i-WampServer.
Faka i-WAMP kumqondisi wempande yediski yakho yangasese yendawo. Isibonelo, isiqondisi sokufaka kufanele sibe ku- "c: \_ wamp \_" uma i-Windows efakwe kwidiski yendawo ("C:").
Ungakhohlwa ukuhlola "Dala i-Ideskithophu ye-Desktop" ukuze ukwazi ukufinyelela kalula kwi-WAMP kamuva.
Uma ubuzwa ukuthi ukhethe isiphequluli sakho esizenzakalelayo, khumbula ukuthi udinga ukuhamba bese uthola ifayela le-.exe. Isu elihle ukuchofoza ngakwesokudla isinqamuleli sedeskithophu sesiphequluli sakho, chofoza "Propietats," bese uya kuthebhu "Isinqamuleli". Indawo yefayili ye-.exe kufanele ibe yinkambu ye "Objectiu".
Ubica el punt de mira i-WAMP, és aïllant- "W" kusendaweni yakho yesaziso somsebenzi. Uma lesi sithonjana sibomvu, kusho ukuthi iseva ye-WAMP okwamanje ayixhunyiwe ku-intanethi. Kakhulu, ngakolunye uhlangothi, kubonisa ukuthi iseva iphelele ku-intanethi. Uma kunjalo, manje ungakwazi ukufinyelela iseva yakho ngokuthayipha i- "localhost" noma i-127.0.0.1 kusiphequluli sakho sewebhu. Ungase futhi ushiye uchofoze isithonjana "W" futhi uchofoze "Indawo yasekhaya."
Ekhasini lakho lelwazi le-WAMP, Qhafaza "phpMyAdmin" ngaphansi kokuthi "Amathuluzi." Lokhu kuzokuvumela ukuba uphathe futhi udale i-base de dades yokufaka kwakho okungaxhunyiwe ku-intanethi ye-WordPress. Ngaphandle qualokho, ungathinta u-http: // 127.0.0.1 / phpmyadmin / kusiphequluli sakho sewebhu.
Base de dades iududala i entsha ku-phpMyAdmin, iya ku- "Amadokhumenti" kusuka kumenyu enkulu. Ungasebenzisa noma yiliphi igama oliyithandayo, kodwa kungcono ukusebenzisa en ebonakalayo njenge "wordpress-yendawo." Qaphela ukuthi igama le-database alilona icala.
Isinyathelo esilandelayo ukulanda i-WordPress kusuka kubo iwebhusayithi enkulu. Khumbula ukuthi ukulanda kufomathi yefolda ephoqelelwe. Udinga kuphela ukukhipha ifolda ye-WordPress ku-"www" engaphansi kwe-WAMP. Isibonelo, us ufake i-WAMP ku- "C: \_ wamp \_", utilitza ifolda ye-WordPress kusiqondisi "C: \_ wamp \_ www \_".
Ukulayisha i-WordPress, iya ku-http: // localhost / wordpress /. Ekuqaleni, uzobe usho ukuthi udinga ifayela "wp-config.php". Vele uchofoze ku- "Dala ifayela lokuhlela" ukuze uqhubeke.
Usuari usuari, plataformes d’allotjament web, ungaqhubeka nokufakwa kwe-WordPress i una plataforma de hosting web. Khumbula ukusebenzisa i- "localhost" njenge-host host futhi usebenzise igama elifanele le-database oyichazile ngaphambili. Uma kuziwa kumsebenzisi wakho we-MySQL, sebenzisa izimpande bese ushiya iphasiwedi ingenalutho.
Ukufaka i-WordPress kwi-Mac Mac
Okokugcina, ukufaka i-WordPress kwi-Mac Mac kuhilela izinyathelo ezifanayo. Kodwa esikhundleni sokusebenzisa i-WAMP, udinga ukusebenzisa isofthiwe ehlukene eyaziwa ngokuthi i-MAMP. Njengokuqala, ungalanda lokhu ngokuqondile kusuka kubo lloc web esemthethweni.
Ngemuva kokufaka i-MAMP, qinisekisa ukulungisa uhlelo lokusebenza ukusebenzisa i-Apache 80 port ne-MySQL 3306 kuqala. Ukwenza kanjalo kukuvumela ukuba uqalise iwebhusayithi yakho yasendaweni usebenzisa i-http: // localhost. Vele uye ku Izintandokazi> Amaports bese ufaka amanani afanele.
Khumbula nje ukuthi udinga ukudala Apache iseva, ngakho qiniseka ukuthi le nketho igcizelelwe lapho udala idokhumenti yakho. Ungasebenzisa amaseva we-Apache ne-MySQL usebenzisa uhlelo lokusebenza oluyinhloko.
Base de dades de Ukwakha i entre la base de dades i el MAMP, chofoza "Vula Ikhasi Lokuqala" bese uya ku- "phpMyAdmin." Kusuka lapho, ungalandela izinyathelo ezifanayo kusukela ku-WAMP tutorial njengoba kuboniswe ngenhla.
Ukufaka nokusebenzisa iZwiPress endaweni yakini kunezinzuzo eziningi. Mane ukhumbule ukulandela imiyalelo engenhla ngokucophelela ukuqinisekisa ukufakwa okuphumelelayo.
NGaphandle kokungabaza, i-WordPress-in işləməsi və ya kəşf edilməsi ilə əlaqəli kokulu kuma-hobbiistlər və digər
Ngaphandle kokungabaza, i-WordPress iyisistimu yokuphathwa kokuqukethwe okuthandwa kakhulu kuma-hobbyists kanye ne-webmasters abaqeqeshiwe ngokufanayo. Inika
Porovnejte top 3 CMS (2017): WordPress vs. Joomla vs. Drupal